Arakan Muslim: ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ၏ ၂၀၁၁-ခု အောက်တိုဘာ(၉)ရက် နေ့စွဲပါ သဘောထား ကြေငြာချက်အား ကန့်ကွက်လွှာ
ပြသာနာ၏ မူလရင်းမြစ်မှာ အယူဝါဒကျဉ်းမြောင်းသော ရခိုင်အမျိုးသားရေးဝါဒီများ၏ သမိုင်းကြောင်း အမှန်ကို မသိချင်ယောင်ဆောင် အမှန်တရားကို လက်မခံလိုစိတ်ကြောင့် ဟိုးရှေးပဝေသဏီကတည်းက အတူတကွ လက်တွဲနေထိုင်လာခဲ့သောရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ အား ကြောက်စိတ်၊သံသယစိတ်ဖြင့် ကြည့် ရှု မြင်ယောင်မိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
….ရခိုင်လူမျိုးများရှေး ပဝေသဏီကပင် နေထိုင်လာခဲ့သော ရခိုင်မြေကို လုယူလိုသူ ဘင်္ဂလီလူမျိုး တစ်စုသည် အကြမ်းဖက်နည်း၊အနုနညး၊၀ါဒဖြန့်ချီနည်း အစရှိသည့် နည်းပေါင်းစုံဖြင့် ကြိုးစားလာခဲ့ သည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ရခိုင်နာမည် ဖျောက်ဖျက်လိုသည့် ရည်ရွယ် ချက်ဖြင့်….အာရခိန်ပြည်ဟု ရေးသားမှုများပြုလုပ်လာကြပါသည်။
နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်းဆောက်ရေးအဖွဲ့ လက်ထက်တွင် ထုတ်ဝေသော “သာသနာရောင်ဝါ ထွန်းစေဖို့” စာအုပ် စာမျက်နှာ ၆၅ အရ မူဆလင်များသည် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀၊ ၁၂၀၀ ကျော်ကပင် အခြေချ နေထိုင်လာခဲ့သူများဖြစ်သည်။ မည်သို့မည်ပုံရောက်ရှိ အခြေချနေထိုင်လာခဲ့သည် ကို အားလုံးသောသမိုင်းပညာရှင်များ လက်ခံကြသည် အတိုင်း အာရပ်ကုန်သည်များသည် ထိုအချိန်က ကုန်ကူး သန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း၊တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းမှ တဆင့် မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား စသည့်နိုင်ငံများသို့ ရောက်ရှိ အခြေချခဲ့သည်။
Arakan မြေမှာ ရှေးပဝေသဏီ ကတည်းက နေထိုင်လာခဲ့ကြတာ ရခိုင်တွေ စောသလား...? ရိုဟင်ဂျာတွေက စောသလား သမိုင်းအထောက်အထားနဲ့တင်ပြပါမည်။
၁၆ ရာစုတွင် ရေးသော “ဟာနီဖါ နှင့် ခိုင်ယာဖူရီ” စာအုပ်တွင် စာရေးဆရာ Shah Barid Khan က ယ္ခုမောင်တောခရိုင်၊မောင်တောမြို့ လဘောစားရွာ(Arabshah Para) သို့ AD ၆၈၀-ခုနှစ်တွင် Mohammed Ali ၏သား Mohammed Hanif သည် Karbala စစ်ပွဲအပြီး သူ၏ ရဲဘော် ရဲဖက်များနှင့် ရောက်ရှိခဲ့သည်။ထိုအချိန်တွင် Queen ခိုင်ယာဖူရီသည် မေယုတောင်တန်း တလျှောက် လုယက်တိုက်ခိုက်မှုများ နှင့် အုပ်စိုးနေချိန်ဖြစ်သည်။ Mohammed Hanif သည် ထို Queen ကို တိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီး လက်ထက်ယူခဲ့သည်။ထို့ကြောင့် Kaiyapuri နှင့်တကွ သူမ၏ အခြေအရံများသည် အစ္စလာမ်သာသာကို ခံယူပြီး အေးချမ်းစွာ နေထိုင်လာခဲ့သည်။ ယ္ခုထက်တိုင် ထိုမေယုတောင်ကြော တစ်ဝိုက်တွင် Hanifa Tonki နှင့် Kayapuri Tonki ဟူ၍ အထင်အရှား တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ အချုပ်ဆိုရလျှင် ယနေ့ ရိုဟင်ဂျာ၏ မူလအစသည် ထိုဖြစ်ရပ်မှ မြစ်ဖျားခံလာသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
တစ်ဖန် အေဒီ (ရ၈၈-ခု )မဟာထိုင် စန္ဒယား မင်းကြီးလက်ထပ်တွင် အာရပ်ကုန်သည် သင်္ဘောများ ရမ်းဗြဲကျွန်း အနီးတွင် ပျက်သွားရာမှ အကူအညီတောင်းလာသော အာရပ်များကို အာရ်ကန်၏ တစ်ခြားနေရာ မြို့ရွာများတွင် နေရာချပေးခဲ့သည်။ ဤသည် မှာ ရိုဟင်ဂျာများ ရေးသော သမိုင်းအထောက်အထားများမှ ကောက်ယူခြင်းမဟုတ် (၁၉၅၇-ခုနှစ် နှင့် ၁၈၇၉-ခုနှစ်) တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော Burma Gazetteers(Akyab District) နှင့် British Burma Gazetteers တို့မှ ကောက်နုတ်ချက်ဖြစ်သည်။
အထက်ပါ သမိုင်းထောက်အထားများကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Arakan တွင် ရှေးပဝေသဏီ ကပင် နေထိုင် လာခဲ့ကြသူများမှာ ရခိုင်များလား…? ရိုဟင်ဂျာများလား…? ရခိုင် နှင့် ရိုဟင်ဂျာ နှစ်ခုစလုံးများလား ထင်ရှားစွာ သိမြင်နိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် နှစ်ပေါင်းများစွာကပင် ရခိုင်လူမျိုးများထက်စော၍ Arakan တွင် ရောက်ရှိ အခြေချ နေထိုင်လာခဲ့သော ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများသည် မိမိတို့ ဘိုးဘွားစဉ်ဆက် နေထိုင်ကျက်စားရာ Arakan ကို Arakan ဟုသုံးခြင်းသည် အလွဲသုံးစားခြင်း မဟုတ်၊လုယူခြင်းလဲ မဟုတ်၊ နာမည် ဖျောက် ဖျက်လိုခြင်းလဲ မဟုတ်ပါ။ ရက်စက်သော စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်၊အယူဝါဒ ကျဉ်းမြောင်းသော လူမျိုးရေး ၀ါဒီများ၏ ကိုယ်ကျိုးဖက် လူမဆန်ခြင်းကြောင့် လူသား အခြေခံအခွင့်အရေးများပါ နစ်နာဆုံးရှုံးခြင်း ခံနေကြရသော ရိုဟင်ဂျာ လူထုတစ်ရပ်လုံး၏ အခွင့်အရေးကို ပြန်ရယူပြီး Sister Community ဖြစ်သော ရခိုင်လူမျိုးများ နှင့် အေးချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင်ရန် မျက်မှောက်ခေတ်၏ ဘောင် စည်းမျဉ်း၊စည်းကမ်း နှင့် အညီကြိုးစား ရုန်းကန်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
Arakan တွင် ဘိုးဘွား စဉ်ဆက်နေထိုင်လာခဲ့သော လူမျိုးများသည် အမိမြေကို Arakan ဟု သုံးနုံးလျှင် ဘယ်ဥပဒေကမှ အပြစ်ပေး အရေးယူ၍ မရပေ။ အယူဝါဒ ကျဉ်းမြောင်းသော လူမျိုးရေးဝါဒီများကြောင့် ထိုကဲ့သို့ မဟုတ်မမှန်ရေးသားပြီး တကမ္ဘာလုံးအား မျက်စိမှိတ်၊နားပိတ်ရန် ကြိုးစားနေကြ ခြင်းဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ရခိုင်အမျိုးသားတို့ကို Arakanese ၊ ရခိုင်ပြည်ကို Arakan မြေပုံများတွင်လဲ Arakan ဟုသာ ယနေ့ထိ Arakan နှင့် Arakanese တို့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်သည်၊ ဘဂါင်္လီလူမျိုးတစ်ခု သည် Arakan နှင့်ပက်သက်သော သမိုင်းများ၊စာအုပ်များကို လိမ်ညာ ဖြန့်ချီ….။
မည်သည့် သမိုင်းဆရာကမျှ ရခိုင်အမျိုးသားတို့ကို Arakanese ဟူ၍ သုံးခဲ့သည်မရှိပါ။ Magh ဟူ၍သာ ရှိသည်။ ရခိုင်သည် Magh ၏ updated version ဖြစ်သည်။ Arakanese ဟုဆိုလျှင် Arakan တွင်လူမျိုးအားလုံးကို ဆိုလိုသည်။Hindu,Muslim,Buddist အားလုံးအကျုံးဝင်သည်။ မြေပုံတွင် Arakan ကိုသုံးခြင်းသည် မဆန်းပါ…။Arakan ကိုသုံးခြင်းဖြင့် Arakan သည် ရခိုင်လူမျိုးအတွက် ချည်းသာ ဖြစ် မသွားပါ။ယခု အချိန်အထိ ကမ္ဘာ့ပညာရှင် မည်သူကမှ Arakan နှင့် Arakanese တို့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် များသာ ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ချက်မပေးပါ။ သိလဲမသိကြပါ။ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးများသည် မိမိတို့၏ သမိုင်းဖြစ်ရပ် အမှန်ကို ရေးခြင်းသာဖြစ်သည်။ဤသို့ ရေးရာတွင်၊ဖြန့်ချီရာတွင် ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်သော သမိုင်းဆရာများ ၏ အမြင်နှင့် မဆန့်ကျင်ပါ…။
သမိုင်းဆရာ Dr.သန်းထွန်း၏အဆိုအရ (၁၄၄၂-ခု) ကျောက်စာပါ အချက်များကို ကိုးကား၍ အာရ်ကန် မင်းများတွင် မူဆလင်ဘွဲ့ နာမည်များ ရှိခဲ့သည်။ ထိုမူဆလင် ဘုရင်များမှာ နတ်မြစ် အရှေ့ဘက် နှင့် ကုလားတန်မြစ် အနောက်ဘက် မေယုတောင်ကြားက ရိုဟင်ဂျာတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ အဲဒီ ဒေသ မှာ နေထိုင်လာခဲ့ကြတာ နှစ်ပေါင်းထောင်ကျော်ပြီလို့ပြောတယ်။ ပိုမိုသိလိုလျှင် ဒေါက်တာ သန်းထွန်း -Kalya Magazine p-27,1994,August ကိုကြည့်ပါ။ထိုကြောင့် ရိုဟင်ဂျာများသည် သမိုင်းကို လိမ်ညာဖြန့်ချီခြင်း မဟုတ် ရခိုင်လူမျိုးများသည်သာလျှင် ရိုဟင်ဂျာ၏ သမိုင်းဖြစ်ရပ်အမှန်ကို လက်မခံ လိုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရပ်မှန်ကို လိမ်ညာလှည်းစားခြင်းဖြစ်သည်။
ဘင်္ဂလီလူမျိုးတို့သည် တဖြည်းဖြည်း ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ နေထိုင်ရဒေသ၊ လယ်ယာမြေများ၊ ဥယျာဉ်ခြံမြေ များ၊ ဘ၀ရပ်တည်ရာ ၀မ်းစာရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများ၊ သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို ၀ါးမျိုလာသည် မှာ ဒေသခံရခိုင်လူမျိုးများအဖို့ ဘ၀ရပ်တည်မူ မရနိုင်အောင် ဖြစ်လာနေပါပြီ…။ ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ လူ့အခွင့် အရေးကို ကျူးကျော် ချိုးပေါက်ခံလာရသည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
၁၉၉၀ ခုနှစ် ၀န်းကျင်မှ စ၍ ရိုဟင်ဂျာ ပိုင်လယ်ယာမြေများ သိမ်းယူကာ တဘက်နိုင်ငံ မှဝင်ရောက် လာသော ဗုဒ္ဓဘာသာ မော့ဂ် များအတွက် အိမ်အသင့် လယ်အသင့် မြေအသင့် ရိုဟင်ဂျာများက တည်ဆောက်ပေးနေရသည်။ ဥပမာ မောင်တောမြို့ တောင်ပိုင်း နှင့် မြောက်ပိုင်းတွင် ထိုကဲ့သို့ စံပြ ကျေးရွာများကို တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်သည်။မောင်တောမြို့၊မြို့မ ကညင်တန်းရှိ မူဆလင် ဘာသာရေး မောရ်ကောစ် ဗလီ ကျောင်းကြီးကို ဖျက်ဆီး၍ မီးသတ်တပ်ဖွဲ ဌါန အဖြစ်အသုံးပြုနေသည်။ ထိုဗလီကျောင်းကြီး၏ Mehrab ကို အိပ်သာအဖြစ် သုံးနေသည်။ မောင်တောမြို့ အထက်တန်းကျောင်း အနောက်ဘက်ရှိ ရိုဟင်ဂျာ အိမ်ခြံများကို သိမ်းပိုက်ယူခဲ့သည်။ ဘူးသီးတောင်မြို့မှ မောင်တောမြို့သို့ အ၀င်ဝတွင် ရှိသော ရိုဟင်ဂျာပိုင် လယ်မြေများကို သိမ်းယူပြီး ဘုရားတည်ခဲ့သည်။ အလယ်သံကျော်မှ မြို့မ ကညင်တန်း အ၀င်တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ ဘုန်းကြီးကျောင်းတိုက်ကို ရိုဟင်ဂျာတို့၏ လယ်မြေများပေါ်တွင် သိမ်းယူတည်ထောင်ခဲ့သည်။
တဖန် စစ်တွေမြို့ ယဉ်ကျေးမှု ပြတိုက်တည်ရှိရာ နေရာသည် ရိုဟင်ဂျာမူဆလင်တို့၏ အိမ်ခြံမြေဖြစ် သည်။ စစ်တွေမြို့မ ဗလီကြီး၏ မြောက်ဘက်တွင် မီးလောင်ရာမှ ဖျက်ဆီး သွားသော ရိုဟင်ဂျာပိုင် အိမ်ယာမြေများကို သိမ်းယူပြီး လူမျိုး ရခိုင်များအတွက် ဆိုင်ခန်း၊ ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက် စသည် တို့ကို တည်းဆောက်ပေးခဲ့သည်။
ထိုမှတစ်ပါး ၁၉၉၄-ခုနှစ်တွင် မင်းပြား နှင့် မြောက်ဦးမြို့နယ်များမှ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ၏ အိမ်ခြံမြေယာများကို သိမ်းယူးပြီး ထိုရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများကို မောင်တောမြို့သို့ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဘ၀သို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ထိုမိသားစုမျာားကို ယ္ခုထက်တိုင် မောင်တောမြို့တောင် ပိုင်းရှိ ကျေးရွာ များ တွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။
အထက်ပါ တင်ပြချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရသူများမှာ ရခိုင်တွေလား ရိုဟင်ဂျာတွေလား သိသာနိုင်ပါသည်။အစိုးရ နှင့် ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ နေ့စဉ်မပြတ် ရက်စက် ချုပ်ချယ်မှုကို ခံနေရသူများမှာ ရိုဟင်ဂျာများပင်ဖြစ်သည်။ ရိုဟင်ဂျာ တို့၏ နေထိုင်ရဒေသ၊ လယ်ယာမြေများ ဥယျာဉ်ခြံမြေများ ကိုသိမ်းယူနေသူများမှာ ရခိုင်လူမျိုးများနှင့် စစ်အစိုးရတို့ပင်ဖြစ်ကြသည်။ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတို့ ဘ၀ရပ်တည်မူ မရနိုင်အောင် ချုပ်ချယ် ကန့်သက် ဖိနှိပ် ရက်စက်နေသူ များမှာ ရခိုင်နှင့် စစ်အစိုးရတို့ပင် ဖြစ်ကြသည်။
ရခိုင်ပြည်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာ အဆောက်အအုံများသည် ကမ္ဘာ့ ယဉ်ကျေးမှုပိုင် အဆောက် အအုံး များ ဖြစ်ပါသည်။လူရမ်းကား လူလိမ် ဘင်္ဂလီတစ်ချို့ကြောင့် ရခိုင်ပြည်ရှိ ဗုဒ္ဓသာသနာ အဆောက်အအုံးများသည် ပျောက်ကွယ်ရတော့မည်…။
ယခုမျက်မှောက်ကာလတွင် မည်သည့် ရခိုင်ဘာသာရေး အဆောက်အအုံးများကို တစ်ခြား ရခိုင် မဟုတ်သော လူမျိုးများမှ ဖျက်ဆီးခြင်း မရှိပါ။ ရခိုင်လူမျိုးများ နှင့် စစ်အစိုးရ ပူးပေါင်း၍ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုး အိစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့၏ ဗလီကျောင်းများ၊သမိုင်းဝင်နေရာများကို ဖျက်ဆီးခြင်းများ၊သိမ်းပိုက်ခြင်း များ ပြုလုပ်လာခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း(၅၀)ကျော်သွားပြီးဖြစ်သည်။
ဥပမာပြရလျှင် မောင်တောမြို့ မြို့မကညင်တန်းရှိ မေရ်ကောစ် ဗလီကြီး၊မြောက်ပိုင်း နှင့် တောင်ပိုင်းရှိ ဗလီကျောင်းများ၊မြောက်ဦးမြို့ရှိ စန္ဒီခန် ဗလီကြီးများကို စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်က ပျက်စီးပြီး ရိုဟင်ဂျာ သမိုင်းဝင် အမှတ်အသားများကို တိမ်ကော မှေးမှိန် သွားအောင် ပြုလုပ်လျှက်ရှိနေသည်။ယ္ခု စစ်တွေမြို့ လောကနန္ဒာ ဘုရားတည်ရှိရာ နေရာသည်လည်း ရိုဟင်ဂျာမူဆလင်များ၏ အိမ်ယာမြေများ၊ ဗလီကျောင်း များကို ဖျက်ဆီးသိမ်းပိုက်ပြီး ဘုရားတည်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
သမိုင်းဝင်သာသနာ့ အဆောက်အအိုများ ပျောက်ကွယ်အောင် ကြံစည်ဖန်တီးနေသူများမှာ ရခိုင်ပဲလား….စစ်အစိုးရနဲ့ရခိုင်ပဲလား…. သိသာမြင်ရှုနိုင်ပေသည်။
ထို့ကြောင့် အနည်းဆုံး နှစ်ပေါင်း (၁၂၀၀) ခန့်ကပင် Arakan တွင်ရှိနေသော ရိုဟင်ဂျာများသည် Arakanese Rohingya ဟုမသုံးနှိင်လျှင် ရခိုင်များသည်လည်း Arakanese ဟုမသုံးနိုင်ပေ။ ရိုဟင်ဂျာ သည်ဘင်ဂါလီ ဖြစ်လျှင် ရခိုင်များသည် သမိုင်းအထောက်အထားများအရ ရိုဟင်ဂျာ ထက်စော၍ Indian ကုလားဘင်ဂါလီ ဖြစ်သည်။
Posted by arakanmuslim at 6:14 AM